Php vs asp.net - MYSTERY ZILLION
March 2010 edited October 2010 in IT Debates
IT Debates ရဲ့ ပထမဆုံး post အနေနဲ့ PHP VS ASP.NET ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ ပြိုင်ငြင်းရန် မဟုတ်ပါ။ ဘယ်အချက်ကကောင်းတယ်။ ဘယ်အချက်တွေက မကောင်းဘူးဆိုတာကို ဆွေးနွေးရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ PHP သမားဆိုတော့
Web 2.0 , social website တွေမှာဆိုရင်တော့ PHP က အဆင်ပြေဆုံးပဲ။ ASP.NET ကတော့ အများအားဖြင့် Enterprise system တွေမှာ အသုံးများတယ်။ PHP မှာ strong community, easy to learn, many framework, easy to built framework စတာတွေရတယ်။ oAuth , RESTful service တွေလည်း လွယ်လွယ်သုံးနိုင်တယ်။ Social sites တွေဖြစ်တော်တော်များများ PHP နဲ့ ရေးထားတယ်။ facebook အပါအဝင်ပေါ့။ IIS ကော Apache မှာပါ run နိုင်တယ်။ Linux server တွေက စျေးအများကြီးသက်သာတယ်။ ASP.NET run မယ်ဆိုရင် windows server မှာပဲ run နိုင်မယ်။ PHP က OO မဟုတ်လည်းပဲ ရေးနိုင်တယ်။ OO နဲ့လည်း ရေးနိုင်တယ်။
လက်ရှိ CRM တော်တော်များများကတော့ ASP.NET နဲ့ရေးထားတာကို သုံးတာ များတယ်။ Stackoverflow ကတော့ ASP.NET MVC ကို သုံးထားတယ်။ ASP.NET က framework ဖြစ်ပြီး PHP က language ပါ။ ASP.NET က framework ဖြစ်တဲ့အတွက် C# သို့မဟုတ် VB.NET ကို အရင်တတ်ထားဖို့လိုတယ်။ OO ကို နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။
ASP.NET ကတော့ အများအားဖြင့် Enterprise system တွေမှာ အသုံးများတယ်။
Enterprise system တွေမှာသုံးတယ်ဆို ပိုက်ဆံအလကားပေးပြီးတော့ ကုမ္မဏီတွေမသုံးပါဘူး။ အားသာချက်တွေရှိမှသာသုံးတာပါ။
Oop! ဒီအတိုင်းမပြောနဲ့လေ။ အားသာချက်တွေပါ ထည့်ပြောလေ။
PHP နဲ့ လက်ရှိ web 2.0 sites တွေ ရေးဆွဲတာလည်း ပိုက်ဆံပေးပြီး ရေးဆွဲရတာပါ။ social site တစ်ခုလုံး scratch ကနေစဆွဲတာလည်း ပိုက်ဆံ အများကြီးပေးရပါတယ်။ e-commerce လို site တစ်ခုကို PHP နဲ့ ရေးပေမယ့် ဆွဲခ လည်း မနည်းပါဘူး။ Enterprise system မှာ Local Intranet အနေနဲ့ ASP.NET ကို အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။
အကီနိုလဲ PHP crazy မို့ PHP အကြောင်းပဲပြောတော့မယ်..အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့
PHP ရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကတော့ cross platform and run everywhere ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ahkeno wrote: »
so.. how Java ? .. and Python ??
IMOH, Python is easy to start and powerful enough .. also. Python is being set up in the L/Unix systems as default.
waiting your reply ,
1. ASP.NET is faster than PHP .. agree ? ( I know the answer :P )
Just like all .NET applications, ASP.NET applications are compiled. This makes them much faster than PHP, whose applications are interpreted. To achieve the same effect with PHP, Zend and PHP accelerator must be installed on the server, and this is rarely the case at most Web hosting companies. Also, OO is much faster in ASP.NET than it is in PHP. Agree ?
do not compare Facebook (php) and MySpace.com ( it's with asp.net and cfm ) , you need to count the "Computing Power". that'sapoint !
2. Choice of Development Environment
which php IDE ( NetBeans, Eclipse, Zend, Aptana, DW ) can beat Visual Studio ??
FYI, VS could make automatically create reports and diagrams from your databases , can debug codes line bye line, and much more .. any PHP IDE can ?
That's not pretty much .. (:
OO is much faster in ASP.NET than it is in PHP. Agree ?
Agreed . ASP.NET က OO design ပါ။ PHP ကတော့ OO ကို fully design လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါ။ OO သမားတွေလည်း သုံးလို့ရသလို OO သမားမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်း ရေးလို့ရတယ်။
VS studio IDE ကြီးက လေးပါတယ်။ IDE မရှိပဲနဲ့ ASP.NET ကောင်းကောင်းရေးလို့မရဘူး။ PHP က notepad နဲ့တောင် ချရေးလို့ရပါ့။ လက်ရှိတော့ Coda ပဲသုံးတယ်။ CodeIgniter အတွက် auto complete ရှိလို့။ Drag & Drop လုပ်လို့ရတဲ့ အပိုင်းကတော့ မယှဉ်နိုင်ပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ASP.NET က web site ဆွဲရတာနဲ့ မတူတော့ပဲ Application တည်ဆောက်သလိုဖြစ်သွားတာ။ Dreamweaver ကို သုံးရင်တော့ PHP ပိုင်း ကDesign အများကြီး သက်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် VS ကိုတော့ မယှဉ်နိုင်ပါ။
I know python is powerful, that why I start learn and using it. But I dont want to discuss about python cause I dont know exactly about it..:)
For Java .huu it is too far for me..
ဟုတ်ပါတယ် PHP သမားတယောက်အတွက်ကတော့ notepad++ တခုရယ် browser တခုရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ အခု အကီနို net bean ကိုလည်းစမ်းသုံးကြည့်နေပါတယ်။ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ notepad++ ကိုပဲစိတ်ထဲစွဲနေတယ်။
ကိုစေတန်ရေ ဒီပိုစ်နဲ့ဆိုင်မယ်တော့မထင်ဘူး ဒါပေမဲ့ တွေ့တုန်းမေးထားချင်လို့ CodeIgniter ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲ။ ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲ။ နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါလား။
CI (CodeIgniter) ကတော့ MVC framework ပါ။ symfony , cakePHP တို့လိုမျိုး framework တစ်ခုပါပဲ။ MVC ကို သုံးပြီးရေးချင်တယ်ဆိုရင် အခုလိုမျိုး framework တွေနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ framework သုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရေးသားရာမှာ ပိုအဆင်ပြေလာစေတယ်။
ဥပမာ။ database select လုပ်တာကို CI မှာ ဒီလိုရေးပါတယ်။
[PHP]$query = $this->db->get('mytable');
// Produces: SELECT * FROM mytable[/PHP]
CI က symfony တို့ cakePHP တို့ထက် လေ့လာရတာ လွယ်ပြီး restricted မဖြစ်ဆုံး framework လို့တောင် ဆိုလို့ရပါတယ်။ library တွေ လွယ်လင့်တကူဖန်တီးပြီး သုံးလို့ရတယ်။ CI က လေ့လာရတာလွယ်ပါတယ်။ CI စာအုပ်တွေကို 4share ကနေ download ချလိုက်ပြီး ခဏဖတ်လိုက်တာနဲ့ စလုပ်လို့ရပါတယ်။ အလွန်ဆုံးမှ ၁ ပတ်ပေါ့။ install တွေ ဘာတွေ လုပ်စရာမလိုတာက symfony ထက်စာရင် ပိုကောင်းတဲ့အချက်လို့ ဆိုလို့ရတယ်။
ASP.NET မှာလည်း MVC framework ရှိပါတယ်။ အခု version2တောင် ရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်။ ASP.NET ကိုယ်တိုင်က framework ပါ။ C#, VB.NET တို့အတွက် Web Framework ပေါ့။ CI ကလည်း framework ပါ။ PHP အတွက်ပေါ့။ ASP.NET မှာ framework တွေအများကြီး မရှိပေမယ့် PHP မှာကတော့ အများကြီး၇ိှပါတယ်။
1. ASP.NET is faster than PHP .. agree ?
Compiler လုပ်ပြီး သုံးတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် interpreted လုပ်ပြီး run ရတဲ့ PHP ထက်မြန်မယ်ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်ပေမယ့် .NET Development မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Abstraction Layer တွေ အဆင့်ဆင့်ရှိနေတာဟာ တကယ်မြန်ဆန်တဲ့ Performance ကို ရနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။
Team နဲ့ ရေးရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကလွဲရင် Text Editor ကိုပဲ သုံးရတာပိုကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ Personally ပြောတာပါ။ Aptana PHP မှာတော့ Line by line debug လုပ်လို့ရတာမျိုး သုံးဖူးပါတယ်။ Linux ပေါ်မှာ Net Bean သုံးရင်လည်း Line by line debug က ရမှာပါ။ နောက်ထပ် choice တစ်ခုက FirePHP လိုမျိုး firefox extension သုံးရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ (FirePHP ကတော့ ကျွန်တော် မသုံးဖူးပါ။)
Report ထုတ်ပေးတာတွေ၊ Class Diagram ထုတ်ပေးတာတွေက ကောင်းတဲ့ Facilities တွေဖြစ်ပေမယ့် သာမန် Project လေးတွေအတွက်က The Need ပါဆိုတဲ့ Feature တွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဲဒါတွေမရှိလည်း Developer တစ်ယောက် အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
CMS platform မှာတော့ PHP based CMS တွေကို asp.net base CMS တွေ မယှဉ်နိုင်သေးတာတွေ့ရတယ်။ Dotnetnuke တစ်ခုလောက်ပဲ list ထဲဝင်တာရှိတယ်။
that why I choose PHP..
PHP code is inserted directly into the HTML that makes upawebsite.
I see free php hosting most.
But I haven't see free asp hosting yet.
I don't know other more.
PHP ရဲ့ပြဿနာက Interpreted Language ဖြစ်နေတာပါ ASP နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် မြန်တာမမြန်တာထက် အရေးကြီးတာက Source Code ကိုမပေးလိုက်ပဲ Project ကို Deliver လုပ်လို့မရပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ Code တွေကို မသိစေချင် မပြင်စေချင်ရင် ထိမ်းလို့မရပါဘူး။ မပြင်ရဘူးလို့ စာချုပ်စာတမ်း ရှိပါစေဦးတော့ မဖတ်ပါနဲ့လို့တားလို့ မရပါဘူး အလွယ်တစ်ကူပဲ ဖတ်လို့ရနေလို့ပါ နောက်ပြီးတော့ ကူးယူပြီးတော့ အခြားတစ်နေရာမှာ ပြုပြင်သုံးနေလို့ရပါတယ်။ Open Source ဆိုတဲ့လူတွေက အော်ကောင်းအော်မယ် Code ကိုပေးလိုက်တော့ ဘာဖြစ်သလဲ ပြင်ချင်လည်း ပြင်ပါစေတွေ ပြောချင်ပြောမယ် အလကားပေးတဲ့နေရာတော့ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ် စီးပွားရှာတဲ့ နေရာမှာတော့ အဲဒါဟာနေရာတိုင်းမှာ အဲဒါမမှန်ဘူး အချို့သောအရေးကြီးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လူတိုင်းကိုပေးမသိနိုင်တဲ့ Business Logic များလည်းအများကြီးရှိပါတယ် အဲဒါကြောင့် ရေးထားတဲ့ Code များကို ဖတ်ချင်တိုင်းဖတ်ခွင့်လည်း မပေးနိုင်ပါဘူး။ ASP, JSP လိုဟာတွေက Compile လုပ်ပြီးသားဖြစ်လို့ DLL တွေ jar တွေနဲ့ Deliver လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း Decompile လုပ်ရင် ဖတ်လို့ရတယ်လို့ ပြောကောင်းပြောမယ် ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ၁၀၀% မဟုတ်ပေမယ့် Decompile ကိုလည်း တားနိုင်သလောက် တားလို့ရပါတယ် Source ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ မဖတ်နဲ့လို့တားလို့ မရပေမယ့် Decompile ကိုတော့ တရားဥပဒေအရ မလုပ်ရဘူးလို့တားလို့ရပါတယ် လုပ်ခဲ့ရင်လည်း ဥပဒေအရ ကာကွယ်နိုင်တာပါပဲ။
ကျွန်တော် asp.net ကို သင်ဖူးတယ် . နောက် php ကို ဖတ်ဖူး တယ် . စာလဲသင်ဖူးတယ်
တကယ်တမ်း အပေါ်ရောက်အောင် တင်ဖို့ အတွက် ကတော့ free hosting , နောက် အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်တဲ့ php ကို ရွေးခဲ့တယ် . တဖြည်းဖြည်းနဲ့ user တွေ လိုအပ်ချက်နောက်လိုက်ရင်း နဲ့ cms ပေါင်းစုံ ကို သုံးဖူး စမ်းဖူး ခဲ့တယ် . အခု asp ကို ဘာမှ မမှတ်မိတော့ပါ . နှစ်တွေ ကြာလာတော့ php ကို ပါမမှတ်မိတော့ပါ . အခု မှတ်မိတာက ကိုယ်သုံးတဲ့ cms က ဘာ version အသစ်ထွက်လဲ ဘာ plugin အသစ်ထွက်လဲ . တစ်နေ့တစ်နေ့ update တင်ရ . version နဲ့ plugin အဆင်မပြေရင် error ရှာရ. . css တွေ ပြင်ရင်း template ချိန်းရနဲ့ အရင် က asp တွေ php တွေကို လွမ်းလိုက်တာဗျာ
တကယ်တန်းတော့ language ထက် ဘာလုပ်ဖို့ အတွက် သင်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးကြည့်သင့်တယ်။
ကို emo လိုမျိုး မှာတော့ cms အတွက်ပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် cms သိရင် လုံလောက်ပြီ။ အလုပ်က wordpress နဲ့ လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် wordpress api တွေနဲ့ php ကို နည်းနည်းသိရင် ရပြီ။ ကိုယ် ဘာလုပ်ချင်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်တယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။
နှစ်မျိုးစလုံးရဲ့ Security ပိုင်းကိုနဲနဲ လောက်သိချင်လို့ပါ ခင်ဗျ.. သင်ကြားပေးကြပါဦး.. Asp နဲ့ Php မှာ ဘယ်ဟာ ပိုပြီးတော့ လုံခြုံစိတ်ချရသလည်း ဘာကြောင့် လည်း ဆိုတာလေး ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် .. CMS တစ်ခုကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ language တစ်ခုသုံးလိုက်လို့ .. လုံခြုံရေးအတွက် မကာကွယ်ထားဘူးဆိုရင် ..ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလည်း ခင်ဗျ .. ပြီးတော့ PHP နဲ့ ရေးထားတဲ့ web တစ်ချို့ရဲ့ link address တွေက တော်တော်လေးကို ရှည်လျားတယ် လို့ ထင်ပါတယ် ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတာလေးလည်း သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ.. Asp ကရော အလွယ်တကူ သင်လို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါ့မလား ... သင်တန်းတွေမှာ သွားတတ်မှပဲ တက်တော့မယ် ဆိုရင်တော့ ... မရှိတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ မြင့်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုများဖြစ်နေမလား တကယ်လို့ တက်လွယ်တယ် ဆိုရင်လည်း php လိုတော့ အလွယ်တကူ မရနိုင်ဘူးထင်တယ် ... ASP က လူတန်းစားရွေးပြီးတော့ PHP က လူသားဆန်တယ် ထင်တယ် ဗျ....
ဟီး တွေ့သလောက်လေး ပြောကြည့်တာပါ .. ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျ..
ဟုတ် ကျွန်တော်လဲ သိပ်မသိဘူး ခင်ဗျ။
ဒါပေမယ့် ထင်မြင်ချက်လေးတွေတော့ ရေးချင်ပါတယ်။
ဘလော့ တစ်ခုရေးတာနဲ့ php နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်
www.blogger.com www.blog.com www.wordpress.com ဆိုတဲ့ site လေးတွေဟာ Free blog creating site လေးတွေပါ
php နဲ့ asp နဲ့ blog နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး
ဘလော့တစ်ခုရေးဖို့ရာ Php သိစရာ တတ်စရာမလိုသလို asp လဲသိစရာတတ်စရာမလိုပါဘူး
တစ်ကယ့်တစ်ကယ် project အသေးလေးတွေ web site အသေးလေးတွေ လုပ်နေသူများအဖို့ free hosting သုံးဆဲပါ။
Free Host နဲ့ Paid Host ကွာခြားသွားတဲ့နေရာလေးတွေကတော့ space, traffic(bandwidth) and loading တွေပါပဲ။
သာမန် web site များအနေနဲ့ free host ကို ကြိုက်သလို သုံးလို့ရပါတယ်။
wordpress လိုမျိုး blog script အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ paid host ကိုလိုပါလိမ့်မယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ sql query များများလုပ်လေ cpu resource များများတက်လေပါပဲ
Free hosting မှာ system usage ကို limit လုပ်ထားပါတယ်
query and database storage ကိုလဲ limit လုပ်ထားပါတယ်
cron တွေကို လဲ ကန့်သတ်ထားပါတယ်
upload file size limit ကိုလဲ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
သို့သော် သာမန် Web Site တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ free hosting ကို သုံးလို့ရနေဆဲပါ
End User များအတွက် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်များ Budget ခိုင်သူများအနေနဲ့ကတော့ Free host ရှိခြင်းမရှိခြင်းဟာ အရေးမပါပါ။
သို့သော် ယခုမှ စလေ့လာသူများအတွက် free host နဲ့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ site ကို world wide web တက်စေခြင်းဟာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။
၄င်းကဲ့သို့ globally Web site တက်သွားခြင်း ဖြင့်လဲ Learner ရဲ့ Moral ကို တက်စေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Paid Hosting ကို ဝယ်သုံးနိုင်တဲ့ individual အလွန်ရှားပါတယ်
hosting ဝယ်မှ တတ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာကလူငယ်လေးတွေ ဘာမှ တတ်မှာမဟုတ်တော့ပါ
matatbu wrote: »
အင်းလေ ဘလော့လည်း php or asp နဲ့ဆိုင်တယ်လို့လည်း ရေးမထားပါဘူး Freehost လည်း အပျော်သုံးတယ် ရေးထားသားပဲဗျ။